Isikhathi sokufunda: 5 amaminithi Europe ukhiqiza futhi ibusa isamba obungenakulinganiswa ikhofi, it has best ikhofi izitolo nezindawo zokudlela ezinhle e-Europe. Kuyinto abathandi ikhofi mecca futhi uma sikhuluma iqiniso, lukhulu okungaphezu nje ukuthi. Cafe isiko ewindini emhlabeni. Senza imizamo…
Isikhathi sokufunda: 3 amaminithi Izitimela zaseParis naseNice zixhumene nohlelo lwesitimela olusheshayo nolusebenzayo ngakho-ke ukuhambela lezi zifundazwe zombili ngasikhathi sinye akukaze kube lula. Lezi zindawo ezimbili ezingafani ukuheha izinkulungwane zezivakashi minyaka yonke. Nice lies at the heart of the stunning French Riviera in…